Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ipulazi lingibuyisele imali yerenti | Ezezimali Zomnotho
Kuthatha isikhathi esingakanani ukubuyisa imali
Omunye wemibuzo abantu abaningi abanayo ngukuthi Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi uMgcinimafa abuyisele ibhalansi esivuna esivele esitatimendeni sami semali engenayo? Yize ipulazi lithembisa ukuthi imali izobuyiselwa zingakapheli izinsuku ezi-5, abantu abaningi balinda isikhathi eside ukuze bakwazi ukujabulela imali yabo.
Namuhla sizochaza ukuthi kungani lokhu kwenzeka
Njalo ngonyaka, ingxenye enkulu yabantu abafaka amafomu entela yentela iba ne- ibhalansi enhle. Njengokujwayelekile, abantu abaningi babelindele ukuthi imali izobuyiselwa kuma-akhawunti abo esikhathini esiyizinsuku ezi-5 zebhizinisi, kepha abantu abaningi abanayo imali kuma-akhawunti abo phakathi naleso sikhathi.
Lokhu kuqala ukuvusa ulaka phakathi kwabantu, okuthi, kude nokuthatha izinto ngokuthula nokubona icala labo ngokwehlukana, baqale ukuthukuthela.
Ibhalansi yesikweletu yabakhokhi bentela ezinsukwini ezi-5
Yize i-hacienda isho kaninginingi ukuthi ibhalansi yesikweletu izobe isilungele abakhokhi bentela zingakapheli izinsuku ezinhlanu, iqiniso ukuthi lokhu kucabanga kuphela kubantu abakhokha intela ngokwesisekelo seholo. Ngamanye amagama, lo mbono wezinsuku ezi-5 wenziwa ngenhloso yokukhuthaza abantu ngokuvamile abangafaki amafomu entela yentela ukuthi benze lokho.
1 Ukubuya okuzenzakalelayo
2 Ukubaluleka kwesimemezelo sonyaka sabasebenzi
3 IHacienda ingashintsha lolu suku
4 Amanye amacala angabambezela ukubuya kwakho
5 Ungasifaka kanjani isicelo sokubuyiselwa imali yerenti
6 Isimemezelo silindile
7 Isimemezelo esirekhodiwe kanye nokuqinisekiswa kwedatha.
8 Ukucutshungulwa kwemali engenayo kuyacutshungulwa
9 Imbuyiselo yakho ikhishiwe
10 Kuthiwani uma inkokhelo yami ingakaze ifike
Amacala ukubuya okuzenzakalelayo, enzelwa abantu abafaka imbuyiselo yabo yonyaka ngesikhathi, basebenza kuphela ezilinganisweni ezihambisana nentela yangaphandle hhayi intela ekhokhiswa emisebenzini yabantu bemvelo, kanye namacala okuhlukaniswa noma wokuhlinzekwa kwezinsizakalo. Futhi ukujabulela izimpahla akungeni kuwo.
Ukubaluleka kwesimemezelo sonyaka sabasebenzi
Noma kunjalo, kukhona ngokomthetho, imigomo engaguquki ukuze impahla kufanele ngikubuyisele imali yakho ngebhalansi yesikweletu. Kubalulekile, noma ngabe umemezela imali engenayo minyaka yonke noma cha, ukuthi ucace ngalezi zinsuku zokugcina.
Umthetho ubeka ukuthi, uma konke kuhamba kahle ngesitatimende sethu semali engenayo futhi kungatholakali uhlobo lokungahambi ngendlela efanele, imali ingagcinwa kwi-akhawunti yasebhange, ku isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingama-40 Kusukela ngosuku umkhokhi wentela acele ngalo ibhalansi esivuna umkhokhintela.
IHacienda ingashintsha lolu suku
Yebo, uMgcinimafa angalushintsha lolu suku, uma ebheka ukuthi kufanele acele ubufakazi kumkhokhi wentela ngemvelaphi yebhalansi eshiwo esivuna yena. Lokho wukuthi, ungacela ubufakazi kumkhokhi wentela we ukuba yiqiniso kwesitatimende sakho futhi lokhu futhi kunesikhathi esiphezulu se- Izinsuku ezingama-20 zokuletha yonke imibhalo. Phakathi kwezinto ipulazi elingazicela yilezi: imininingwane yabakhokhi bentela, imibiko yedatha enikezwe esitatimendeni semali engenayo noma eminye imininingwane eyengeziwe ipulazi elibona lidingeka ukuqinisekisa umsuka wale mali eshiwo. Noma umkhokhi wentela eletha yonke imibhalo, umkhokhi wentela anganquma ukungayinikezi umkhokhi wentela, ngoba imininingwane ekhonjiswa yilowo muntu ayiboni eyangempela.
Uma konke kulungile futhi umuntu uletha yonke imininingwane ngendlela efanele, uMgcinimafa unezinsuku ezimbalwa zokunikeza imali ngemuva kokulethwa kwemibhalo.
Uma kwenzeka umkhokhi wentela eletha yonke imibhalo kodwa uMgcinimafa esadinga okwengeziwe ukuqinisekisa umsuka wemali, bazonikezwa okusha kungakapheli izinsuku eziyi-10 ukuletha imibhalo emisha eceliwe. Uma ngemuva kwalesi sikhathi, uMgcinimafa namanje engakwazi ukuqinisekisa umsuka wawo, uzokwenqatshwa ngokuzenzekelayo.
Amanye amacala angabambezela ukubuya kwakho
Uma unamaphutha amaningi
Uma kwenzeka okhokhela intela ethula isitatimende semali engenayo lapho kubonakala khona ngokucacile ukuthi unamaphutha emininingwaneni ayiqukethe, uMgcinimafa unegunya lokucela umkhokhi wentela ukuthi acacise ngokubhala futhi kungakapheli izinsuku eziyishumi, yonke imininingwane itholakale ephepheni bese uletha.
Lawa maphutha angaba yinoma yiluphi uhlobo, kusuka ku- inkinga nge-akhawunti yasebhange yembuyiselo (okungukuthi, izinombolo azihambelani nalezo osuvele uzenza) kufinyelela kudatha yomuntu siqu osuvele unayo ngalowo muntu.
Esimweni lapho inkinga isezinombolweni ezinamanani okufanele abuyiswe, uMgcinimafa ngeke acele umkhokhintela ukuthi acaciselwe futhi uzobuyisa inani langempela elimakwe ngohlelo lwalo, ngaphandle kokuthi abize umkhokhi wentela enze isimemezelo sokungezelela.
Ubona kanjani, hacienda unganweba usuku lokukhokha kwakho ngaphezu kwezinsuku ezi-5 ngisho nezinsuku ezingama-40 ngomthetho, inqobo nje uma ungafakazela ukuthi isitatimende semali engenayo esifakwe ngumkhokhi wentela asilungile.
Uma kwenzeka, ngemuva kokuhambisa i- isitatimende seholoNgemuva kwamasonto amabili uMnyango wezeziMali ungakaxhumani nawe, kungenzeka ukuthi akunankinga ngesitatimende sakho semali engenayo nokuthi kusalindwe kuphela ukuthi imali ifakwe kwi-akhawunti yakho ngokuzenzekelayo. Khumbula ukuthi, uma kungekho muntu othinta wena ukucela amadokhumenti amaningi, isikhathi ngokomthetho yizinsuku zebhizinisi ezingama-40 ukuze ukwazi ukujabulela imali yakho
Kwenzekani lapho wenqaba ukubuya kwami ​​kodwa ungangitsheli ukuthi kungani
Lokhu, yize kungeyona into ejwayelekile, sekwenzekile, kushiya abantu abebelinde imali yabo bengazi ukuthi bangathi bangaxazulula kuphi le nkinga. Empeleni, abantu abaningi ukubuya kwabo kunqatshiwe ngaphandle kokubika futhi bathola ukuthi baqala nini inqubo yokufaka isicelo.
Uma kwenzeka sinenkinga, sinethuba lokufuna, ngoba ngokomthetho, uMgcinimafa kumele asazise ukuthi ukubuya kwethu kwenqatshiwe nokuthi kungani. Kulokhu, kufanele uvule ifayela le- isitatimende esimelene nezezimali ukuchaza ukuthi kungani ukubuyiswa kwakho kunqatshiwe nokuthi imiphi imibhalo abayidingayo ukuqinisekisa imininingwane. Ngaphezu kokukunikeza isikhathi sezinsuku ezingama-20 zokusebenza ukuletha amadokhumenti.
Uma kwenzeka ukuthi i-hacienda ingafaki imali yakho kulo nyaka, inkokhelo kufanele yenziwe ngendlela efanayo, kepha i-hacienda kufanele ingeze enanini eselivele lichaziwe inkokhelo ka-3,75% wenzalo.
Ungasifaka kanjani isicelo sokubuyiselwa imali yerenti
Akunakwenzeka ukuthi wenze isicelo ngalelo fa, ngoba ipulatifomu ayisivumeli lesi sinyathelo, noma kunjalo singabuyekeza isimo sethu efeni bese sibona ukuthi konke kusalungile, ngoba njengoba sishilo phezulu, kwesinye isikhathi UHacienda uyakwenqaba ukubuya kepha ayikwazisi umkhokhi wentela.
Ukuze wazi ukuthi ikuphi isimangalo sakho, sizokhuluma nawe ngemilayezo engahle iphume
Le nketho iphuma lapho idokhumenti yethu isivele isepulazini, noma kunjalo, abasasibuyekezi isicelo sethu.
Isimemezelo esinenani elisebenzayo. Hlola inani.
Lokhu kuvela lapho kutholakale amaphutha ekubuyiseni kwethu intela yemali engenayo. Ngokujwayelekile kulezi zimo, isimemezelo kufanele senziwe kabusha ngokuphelele noma uma sisesesikhathini, xhumana noMgcinimafa ukuze uqinisekise ukuthi amaphutha ayini.
Isimemezelo esirekhodiwe kanye nokuqinisekiswa kwedatha.
Lokhu kukhombisa ukuthi ipulazi libuyekeza isitatimende semali engenayo
Ukucutshungulwa kwemali engenayo kuyacutshungulwa
Kulokhu, kusitshela ukuthi isimemezelo sesivele sicutshunguliwe nokuthi uMgcinimafa uyavumelana nemininingwane nokubuyiselwa kwemali okuceliwe. Kulokhu, singalinda nje ukuthi ipulazi lisitshele ukuthi imali yethu izofakwa kuluphi usuku kwi-akhawunti.
Imbuyiselo yakho ikhishiwe
Imali yakho isivele ikhishiwe. Uma kungakapheli izinsuku eziyi-10 ungakayitholi imali obuyilindele, kufanele uye kubaphathi bakho nemininingwane yekheli lakho lentela; kodwa-ke, ngokuvamile akudingekile ngoba i-hacienda ikhiphe inkokhelo.
Kuthiwani uma inkokhelo yami ingakaze ifike
Inketho engcono kakhulu ukuza ehhovisi lethu lentela eliseduzane, lapho labo ababhekele leyo ndawo bezokwazi ukusitshela ukuthi sikuphi isimo se-akhawunti yethu nokuthi kungani singayitholanga inkokhelo nokuthi kufanele siqhubeke kanjani.
Uma ipulazi lingakulaleli noma likunika isikhathi eside, ungaya njenge- indlela yokugcina eya e-AEAT futhi kukhona ukufaka isimangalo. Ukuze ukwazi ukukwenza ngale nkundla, kufanele ube nesiginesha edijithali, ngaphandle kwalokho ngeke ukwazi ukukwenza.
Yize lokhu kungeke kusheshise ukukhokha, ngoba akukho okuzokusheshisa, sizothola umlayezo ovela kithi ozositshela ukuthi kwenzekani ngempela ngenqubo yethu nokuthi sizokuthola yini noma cha ukukhokhelwa, yize ukulinda end, kuyafana kuwo wonke umuntu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » Kuthatha isikhathi esingakanani ukubuyisa imali
filip mihaela kusho
Sawubona, ngiyazi ukuthi imali yerenti ingena isikhathi esingakanani? Ngineviki lokuthi umnqamulajuqu ufanele nini futhi akukho okuphuthumayo lapho ngifaka umholo kwi-akhawunti yami yasebhange, ngiyabonga.
Phendula ku-filip mihaela
USusana Maria Urbano Mateos kusho
Sawubona Filip, angikwazi ukukunikeza usuku oluqondile, kepha uma uthumele isimemezelo emasontweni ambalwa edlule futhi kuyimali okufanele ibuyiselwe ngaphansi kwama-euro angama-1500, uzosicubungula kungekudala.
Phendula uSusana Maria Urbano Mateos
Sawubona, ngingowokufika, nginomshana wami futhi ngihlala nendodakazi yami eneminyaka eyi-16 nendodana yami eneminyaka engu-18, ngenxa yezimo ezihlukile, engingakwazanga ukuthola umshana wabo kubo futhi manje ipulazi lisho ukuthi abanaye umshana ukuze bangangibuyisi, ngenzenjani?
Sawubona Rudy, uma ufaka izingane zakho emqashweni, okumele ukwenze ngoba kudonswa intela, kumele babe izakhamizi ezine-NIE noma i-Nif, uma sebeneminyaka engaphezu kwengu-14 ubudala kufanele uhlasele i-NIF noma i-NIE yabo . Uma ubabandakanyile futhi bengenayo i-NIE, kufanele uyikhiphe noma uye kwa-Agency Agency bese wenza eyodwa ehambisanayo ubasuse emholweni. Yindlela kuphela yokuyibuyisa, ngoba njengoba ungenayo i-NIE awukwazi ukuyifaka, noma ngabe unesibopho sokuyifaka kwirenti. Ngikweluleka ukuthi wenze i-aphoyintimenti eMgcinimafa bese wenza okuhambisanayo bese uzama ukuxazulula i-NIE yakho ngokushesha okukhulu. Ngikufisela okuhle
Kuya ngempahla, kepha uma ingekho ngaphezu kwama-euro angama-1500, ngeke kuthathe isikhathi eside ukukufaka, ungangena ekhasini lesakhiwo bese ubona isimo sembuyiselo yakho.
UJulius miguel kusho
Sawubona, bengifuna ukwazi ukuthi usho ukuthini umthetho uma uthi uMgcinimafa unezinsuku zebhizinisi ezingama-40 zokubuyisa imali.
Phendula uJulio Miguel
Sawubona Julayi, awukho umthetho othi yizinsuku ezingama-40, ngaphezulu, zingakubuyisela kungakapheli unyaka wekhalenda kuze kube nguDisemba 31, futhi uma unyaka wekhalenda udlula, inzalo ehambelana nayo kuzofanela isetshenziswe. Kepha uma kuliqiniso ukuthi uma wethula isimemezelo sangaphambilini, kulinganiselwa ukuthi kubuyiswe kungakapheli isikhathi sezinsuku ezingama-40, sikhuluma ngokubuya kwemali engaphansi kwama-euro ayi-1500. Akuwona umthetho, noma isimangalo, kepha kuvame ukubuyiswa ngesikhathi esifushane.
Sawubona!! Ngingathanda ukwazi isikhathi esithathayo ukubuya uma ekubonisaneni ngokubuya kwami ​​bangitshela ukuthi ngoMeyi 3 kwenziwa ukudluliswa nokubuyiselwa kwami ​​kwi-akhawunti yami yasebhange.
Ozithobayo, futhi ngiyabonga kakhulu
Yebo, umbuzo ukumaka ngoMeyi 3, kufanele ngabe usunayo vele ku-akhawunti yakho, ubheke ukuthi ilungile yini, ngoba leso saziso sifika lapho ukubuyiselwa kwemali sekuvele kuthunyelwe ebhange lakho, futhi ukudluliswa kwemali kuthatha okungenani okungu-3 izinsuku uma kungamabhizinisi ahlukile, uma ngabe kuyibhizinisi elifanayo, ngosuku olufanayo kufanele ube nalo. Hlola i-akhawunti, kubaluleke kakhulu, uma kwenzeka kuba nephutha, kufanele uxhumane ne-Tax Agency.
INazaretha Ortiz osorio kusho
Sawubona, ngiye ngoMeyi 11 ukuyoguqula ukubuyiswa kwami ​​kwentela, kepha kuze kube namuhla, ukubuya kwabo kusaqinisekiswa futhi angikuqondi lapho benza ukuguqulwa kimi. Ngimele isikhathi esingakanani ukulinda inani elingaphansi kwama-euro angama-500 ukuthi libuyiswe?
Phendula kuNazaret Ortiz osorio
Izimbuyiselo zokulungisa zithatha isikhathi eside, ngoba zihlala ngemuva kwalokhu okukhishiwe, kuzofanele ulinde i-Agency Agency ukuthi ibuyekeze lokho okukhishiwe bese uqala phansi. Sethemba ukuthi bazokubuyisela maduze, ungathola kuwebhusayithi efanayo lapho ubona khona ukuthi iyabuyekezwa, izokubeka lokhu okuphethwe, noma kubuyiselwe.
Ngiyethemba bazokubuyisa kungekudala, ukubingelela
Sawubona. Izolo bengikwenza lesi sitatimende emahhovisi entela futhi bathola iphutha. Singumndeni omkhulu embusweni ojwayelekile, umyeni wami useqoqe isitatimende sakhe ngama-euro angama-600 okudonswa komndeni omkhulu futhi ingxenye yami ibilahlekile, kodwa bangitshele ukuthi angihlangabezananga nezidingo zokukubala ngokugcwele nokuthi Ngingamnika ilungelo lokuthi abakhokhise. Kuthiwa yilokho abakwenzile, ngokulungiswa okuhambisanayo kwesimemezelo sabo ukuze bazongena kuma-euro ami angama-600. Isimemezelo sami senziwa kimi ngawodwana, kepha lapho besibuka ekhaya, abalibonisanga ibhokisi engilinika lona zona futhi ziyangishiya Ukubuyisa ama-euro angama-400 emayini engaphezulu. Ingabe bathatha isikhathi eside ukubuyisela lokho kulungiswa kuye? Angazi noma ngilungise okwami ​​noma okwakho. Ngiyabonga
Sawubona, Usuvele unecala lokuthi ku-Agency Agency efanayo, bayabandakanyeka ekuxhasweni kwama-euro ayi-1200 omndeni omkhulu. Okokuqala, ngikweluleka ukuthi ucele inkokhelo yanyanga zonke, kungaba yi-akhawunti yakho noma eyomlingani wakho, okungukuthi, ama-euro angama-100 ngenyanga, uma ubona okuncane kodwa usuvele ukuqoqile futhi uyazigwema lezi zinto. Uma ukwenzile kulo nyaka, kudonswa emqashweni, kepha angiqondi ukuthi kungani ungakwazi ukufinyelela kuwo uma umlingani wakho ekwazi. Ekuphetheni, ukuze uzuze kuma-euro ayi-1200, kufanele udonse izingane nge-100%, kuphela umlingani wakho noma umyeni wakho. Imvamisa kudonswa ingane engama-50% ingane ngayinye, ngaphandle uma omunye walaba ababili esula esikhundleni ngenxa yomunye.
Into enhle ongayenza kuleli cala ukuthi basilungise isimemezelo esiyiphutha, ngoba ekugcineni bangakucela ukuthi ucaciseleke ngokwabo. Ngakolunye uhlangothi, usuku lokubuya luyehluka kakhulu njengoba kuyisichibiyelo, okusho ukuthi ... lubuyela emgqeni. Ngiyethemba ukuthi ngonyaka ozayo, lokhu akwenzeki kini, imikhonzo
patricia molina martin kusho
Sawubona, sawubona, bengifuna ukwazi isikhathi esithathayo ukwenza ukubuyiselwa kwemali yerenti engiyenze ngoMeyi 6? Ngiyabonga
Phendula u-patricia molina martin
Sawubona Patricia, iqiniso ukuthi alukho usuku oluqondile, banesikhathi kuze kube nguDisemba 31 kepha uma isimemezelo sakho sincike emininingwaneni yezimali ye-ejensi yentela, noma uqinisekisa okusalungiswa, kungathatha isonto kuye ezinsukwini ezingama-40. Uma uthengisa noma ufaka noma yikuphi ukubanjwa okungaziwa ku-ejensi yentela, imvamisa kuthatha isikhashana. Isibonelo, kungithathe izinsuku eziyi-8 uqobo.
Sawubona, ngamukele okusalungiswa ngomhlaka 5/5/17 futhi lithi; Imbuyiselo yakho iyacutshungulwa, uma ufisa, ungabheka izikhalazo zakho ngokusebenzisa …… ingabe lokho kuvamile?
Sawubona Cristina, usesikhathini esivamile, uma uke wenza ukuthengiswa kwempahla yezimali enjengezimali, amasheya noma izakhiwo, ngokuvamile kuthatha isikhashana. Izimemezelo zokuthi babuya kuqala yilezo ezicishe ziqinisekise imininingwane yentela yoMgcinimafa noma imali engenayo yewebhu.
Ngiyethemba bazokubuyisa kungekudala, qhubeka uthintane nesimo sakho nanoma yimiphi imibuzo lapha esiyikho.
Sawubona, ngomhla ka-12 ngenza isimemezelo ehhovisi le-ca caxa futhi kwaphuma ukubuyisa ama-euro angama-800, bangitshela ukuthi ezinsukwini eziyi-10 bangikhokhele, kusukela namuhla abakasikhokhi kimi ...
UManuel Jesus Martínez Batista kusho
Sawubona, umbuzo wami unzima ngandlela-thile noma ngicabanga kanjalo. Kusukela ngo-2009 ngenze isimemezelo eBizkaia hacienda ngenxa yezizathu zomsebenzi, kodwa selokhu kwaphela unyaka wezi-2015 bengihlala eMalaga, ngakho-ke kulo nyaka bekufanele ngiphume ngomgcinimafa kahulumeni, ngiwethula ngomhla ka-18 futhi angikaze ngiyitholile ku-akhawunti yami okwamanje, kujwayelekile? Inani elizobuyiselwa? idlula ama-euro angama-2000. Ngiyabonga kusengaphambili
Phendula uManuel Jesús Martínez Batista
UMari nieves kusho
Sawubona, ngifisa ukwazi ukuthi ngenze isimemezelo ngoMeyi 24 futhi abakangibuyisi. Akukho lutho, I.salio ukubuyisa i-1.400 kepha kusasho ukuthi kuyasetshenzwa
Ngabe kufanele ngilinde isikhathi esengeziwe kangakanani?
Ngimemezele ngoMeyi 26 ehhovisi eligunyaziwe, usizo kuphela uMkhandlu Wedolobha olunika imindeni engenayo imali encane olushintshiwe futhi kuze kube namuhla, okucishe kube yinyanga, isimo sami siyaqhubeka nokuba "isimemezelo sakho siyenziwa kucutshunguliwe. " Kuyinto evamile?
Ukubuyiselwa kwami ​​kwafakwa ngo-Ephreli futhi akukabuyiselwa kimi. Inani liyi- € 1.600, kujwayelekile?
Sawubona, ngoJuni 26, ngangenza isitatimende.Kuze kube namuhla, angikaze ngingeniswe, ngabe kujwayelekile?
Lesi sitatimende ngikwenze ngoMeyi 5 kanti ngomhlaka 7 besisiqinisekiswa futhi namhlanje konke kuyafana. Lokhu kujwayelekile.
sawubona, angingabazi ukuthi ngilethe isitatimende sami semali engenayo ngosuku lwesi-4 kodwa benginephutha, kunalokho ngibeke ukuthi sengithole imali yomndeni omkhulu engingazange ngiyithole, ngiyishintshe futhi ngiphazama futhi ngoba ngibeke ukuthi ngisebenzile ngenyanga engangingenayo ngafinyelela intengo ephansi futhi ngaya ehhovisi lami wangitshela ukuthi angithumele enye eyayihambisana futhi ekugcineni yangihambela kahle, kuphuma ukubuyisa ama-euro angu-1.083 futhi ungitshela ukuthi isitatimende sami sisaqhubeka kungathatha isikhathi esingakanani
Izinyathelo zezomnotho zikaDonald Trump
Yimiphi imikhakha ezoba namandla kakhulu ngonyaka ka-2017?